ဗုဒ္ဓနှင့် သူ၏ဓမ္မ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗုဒ္ဓနှင့် သူ၏ ဓမ္မ သည် ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ရေးသားထားသည့် ကျမ်စာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ပညာရှင် B. R. Ambedkar ၏ နောက်ဆုံးလက်ရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် B. R. Ambedkar သည် သေဆုံးခဲ့ပြီး ထို့နောက် ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ခရစ်စတိုဖာကွင်း to Christopher Queen က စာသားများသည် Navayana ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ကျမ်းစာများမှ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဟိန္ဒီရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည့် A Journey of Samyak Buddha သည် ဤစာအုပ်ကို အခြေခံကာ ရိုက်ကူးထားသည်။
Dr. Babasheb Ambedkar : Writings and Speeches, Vol. 12. Unpublished writings ; Ancient Indian commerce ; Notes on laws ; Waiting foravisa ; Miscellaneous notes, etc.
၎င်းကို ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် Maharashtra အစိုးရပညာရေးဌာနမှ Ambedkar ၏ ပြောစကားများ၊ ရေးသားမှုများအဖြစ် ၁၁ တွဲမြောက်အဖြစ် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ကာ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤစာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဟိန္ဒီ၊ ဂူဂျာရတ်, Gujarati,Telugu, Tamil, Marathi, Malayalam, and Kannada စသည့် ဘာသာစကားများစွာသို့လည်း ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ခံခဲ့ရသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
B. R. Ambedkar က ဤစာအုပ်သည် သူ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအား နားလည်မှုအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာသည့် စာအုပ်သုံးအုပ်ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ အခြားသော စာအုပ်နှစ်ခုမှာ (i) Buddha and Karl Marx; and (ii) Revolution and Counter-Revolution in Ancient India တို့ ဖြစ်ကြသည်။
Ambedkar၊ Bhimrao Ramji; Rathore၊ Aakash Singh; Verma၊ Ajay (eds) (2011)။ The Buddha and his dhamma:acritical edition။ Oxford University Press။ ISBN 9780198068679။ CS1 maint: extra text: authors list (link)
Baumann, Martin (1991). Neo-Buddhistische Konzeptionen in Indien und England: Zum 100. Geburtstag Bhimrao Ramji Ambedkars, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte (de) 43 (2), pp. 97-116
Sangharakshita (1986)။ "The Buddha and his Dhamma"။ Ambedkar and Buddhism (PDF) (1st ed.)။ Windhorse။
The Buddha And His Dhamma Book Online
↑ Ambedkar, B. R. The Buddha and His Dhamma, retrieved 2008-12-27
↑ Christopher Queen (2015)။ Steven M. Emmanuel (ed.)။ A Companion to Buddhist Philosophy။ John Wiley & Sons။ pp. 529–531။ ISBN 978-1-119-14466-3။
↑ Film on Buddha based on Ambedkar's book to be released on March 15။ The Times of India (13 March 2013)။ 19 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dr.Babasheb Ambedkar, writings and speeches, volume 11
ဤ စာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်း ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗုဒ္ဓနှင့်_သူ၏ဓမ္မ&oldid=537713" မှ ရယူရန်
၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။